नेपालीहरूलाई नेपाली भएर बस्न दिनुस् : प्रधानमन्त्री ओली
अमरवाणी संवाददाता /काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउन र सामाजिक सद्भाव खण्डन हुन नदिने बताएका छन् । रिर्पोटर्स क्लवको कार्यक्रममा ओलीले शनिवार युरोपेली युनियनतर्फ संकेत गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अलिअलि आवाज कहाँबाट आएको छ ? स्वीच कहाँ छ ? हेर्ने बताउँदै उनले भने, ‘म सबैलाई भन्न चाहन्छौं, नेपालीहरूलाई नेपाली भएर बस्न दिनुस् । नेपाल एकतावद्ध हुन चाहन्छ, सम्बृद्ध हुन चाहन्छ ।’
नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’प्रति आक्रोशित ओली
आफूलाई वारेन्ट जारी गर्ने नेक्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई केटाकेटी खेल नखेल्न चुनौती दिए । ‘केपी ओलीलाई वारेन्ट ? यस्तो ठट्टा मजाक ? बरू प्रहसन कार्यक्रममा आउनुस्, मदनकृष्ण, हरिवंश र धुर्मुसलाई भन्दिन्छु ।’
कार्यक्रममा ओलीले कुरा थपे, ‘प्रचण्डलाई वारेन्ट रे, कुन गाउँमा सात दिनभित्र हाजिर हुन आउनु रे ? विप्लवलाई यस प्रकारका राजनीतिक मजाक नगर्न सुझाव दिन चाहान्छु । अलि बढ्ता भयो के !’
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक अब यस्ता कुरामा नअल्झिने बताए । उनले भने, ‘माओवादी जनयुद्धको खाल उठिसक्यो, खाल नै नभएपछि च्याखेहरूले यो बन्द गरे हुन्छ ।’
ओलीले चन्दा उठाउनका लागि विप्लव समूहले क्रान्तिको गफ दिइरहेको टिप्पणी गरे । ‘सुतली बम पनि माक्सवादको सिद्धान्त हुन्छ ? चन्दा उठाउनका लागि सिद्धान्त र क्रान्तिका गफ दिने ?’ ओलीले प्रश्न गरे । सार्वभौमसत्ता जनतामा आइसकेको भन्दै ओलीले शोखका लागि क्रान्तिकारी नहुन आग्रह गरे ।
सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार माध्यमलाई सरकारले अनुचित थिचोमिचो गर्छ भन्ने भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘वाम सरकारले अधिनायकवाद ल्याउँछ । प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्छ भन्ने सुुन्नु भएको होला ।’
प्रकाशित १७ चैत्र २0७४ , शनिबार | 2018-03-31 03:22:16